I-Galaxy S11 sele ikhula phantsi kwegama lekhowudi elithi 'Picasso' | I-Androidsis
Ibe yinyanga nje kuphela oko kwasungulwa ifayile ye Galaxy S10, kwaye Isigebenga saseMzantsi Korea sele siqalisile ukuphuculwa kweGPS S11, Iflegi elandelayo eza kuphumelela le yangoku, esenza kakuhle kakhulu ekusebenzeni.
Ngokutsho kwe @Lukhanyo, iakhawunti yeTwitter ethande ukuvuza ulwazi oluyinyani, Isamsung yabhaptiza iGPS S11 ngegama elithi "Picasso", eyaba yeyomzobi odumileyo waseSpain.
Ngelishwa Isizathu salo gama loyilo asaziwa. Igama elitsha lekhowudi lihambelana ne ikhowudi yegama leGalaxy Note 10, elithi "Da Vinci". Bobabini abalinganiswa babengabaculi. Oku kusenokubonisa ukuba "zezobugcisa", ukuyibeka ngolu hlobo, into engenakuba sengqiqweni ukucinga ukuba sithathela ingqalelo ukuba ziya kuba zezona zixhobo zingcono zomenzi ngexesha lokusungulwa.
Ikhowudi ye-R & D yeGPS: I-Picasso pic.twitter.com/AOtMq61Rou
- iphela yendalo (@UniverseIce) Ngamana 19, 2019
Igama elitsha lekhowudi licebisa ubukho bezinto ezithile zobugcisa kwi-Galaxy S11. Kuya kuba ngumdla ukwazi imveliso yokugqibela ngasekupheleni kwalo nyaka ngokunikezela nangokuvuza. Okwangoku, yonke into enokuvela, ngaphandle kolu lwazi, ayinakuxhaswa ngokuthembeka kuba iya kuba ziimbono ezikude kwinto esinokuba nayo kunyaka olandelayo.
Nangona kunjalo, I-Galaxy S11 iqinisekile ukuthwala inkqubela phambili entsha kwi-Galaxy S10. Inkampani yaziwa ngokusebenza kwi "full-screen" infinity display, eza ngaphandle kwemingxunya okanye izilayidi.
Kwakhona, kulindeleke ukuba kuboniswe uyilo olupheleleyo lwe-bezel kunye nekhamera engezantsi komboniso Kwaye oko kuza neprosesa ephuhliswe kwitekhnoloji ye-EUV esekwe kwi-5nm ye-FinFET, eya kuthi ibonakalise ukuphuculwa okuninzi kunye neflegi yangoku ye-brand.
Ngokumalunga nezinye iinkcukacha, Inkqubela phambili ebonakalayo ilindelwe kuwo onke amacandelo, njengakwiikhamera, nangaphezulu kwayo nantoni na. Iya kuba yinto enomdla ngokwenene ukuba eli sebe liza kuguqukela njani kwisixhobo esilandelayo se-Samsung.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy S11 sele ikhulile phantsi kwegama lekhowudi elithi 'Picasso'